Fursadaha Shaqada - Helitaanka Sinnaanta Caalamiga ah
Equal Access International (EAI) waa hay'ad caalami ah oo aan macaash doon ahayn (501 (c) (3)) oo ka shaqeysa dalal badan oo Afrika iyo Aasiya ah. EAI waxay abuurtaa istiraatiijiyado isgaarsiineed oo gaar ah iyo xallinta xallinta wax ka qabashada qaar ka mid ah caqabadaha ugu halista badan ee ku dhaca dadka ku nool dunida soo koraya ee dhinacyada dhisidda iyo beddelista xag-jirnimada; ku guuleysta sinaanta jinsiga iyo xoojinta haweenka; iyo maamulka iyo ka qeyb qaadashada bulshada.
EAI waxay si joogto ah u raadineysaa hal abuurnimo, shaqsiyaad karti leh oo ka soo kala jeeda asallo kala duwan oo leh xirfado iyo karti wax ku biirisay kooxaheenna xarunta iyo duurka. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dalbato!
EAI waa loo shaqeeye fursad loo siman yahay. EAI waxay soo dhaweyneysaa oo taageertaa jawi shaqo oo kaladuwan, oo loo wada dhan yahay. Sidaas oo ay tahay, waxaa naga go'an kor u qaadista fursado shaqo oo loo wada siman yahay (EEO) dhammaan shaqaalaha iyo codsadayaasha. EAI waxay ka gaartaa go'aano shaqo oo ku saleysan baahiyaha hay'ad, shuruudaha shaqada, iyo shahaadooyinka shaqsiyeed iyadoon loo eegeyn jinsiyadda, midabka, diinta, lab / dhedig, asal qaran, da ', naafo, xaalad magangalyo ilaalin ah, xaalad guur, hanuuninta galmada, muuqaal shaqsiyeed, xaalad militari, jinsi. aqoonsiga ama muujinta, macluumaadka hidaha, xiriirka siyaasadeed, heerka waxbarasho, heerka shaqo la aanta, meesha aad ku nooshahay ama ganacsiga, isha dakhliga, ama go'aanka caafimaad ee taranka ama noocyada kale ee la ilaaliyo, nashaadaadka, ama shuruudaha sida ay farayaan federaalka, gobolka iyo sharciyada maxalliga ah . Intaa waxaa sii dheer, kadeedis ama takoor ku saleysan astaamahan looma dulqaadan doono EAI. Meeleyn macquul ah ayaa loo heli karaa shakhsiyaadka aqoonta u leh itaal darrida iyo shakhsiyaadka u qalma ee leh xaddidmo uur la leeyahay, dhalmo, naasnuujin, ama xaalad caafimaad la xiriirta.
Meelaha Meelaha Maxaliga ah
cusub ee Barnaamijka adkeysiga nabadda (R4P) waxay shaqaaleysiineysaa booska hoos kuqoran. Kani waa mashruuc ay maalgelisay USAID muddo shan sano ah oo lagu xoojinayo adkeysiga bulshada iyo barashada, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada, si looga hortago ugana hortago xagjirnimada rabshadaha wata ee ka socota aagagga xuduudaha waqooyiga dalka.
Hawlaha Cilmi-baarista, Barashada iyo Warbixinta Isuduwaha / Isuduwaha de Recherche-Action, Tababbarka et Rapportage (RAAR): Abidjan (Waqtiga 50% gobolada xuduudaha waqooyiga)
The La Xisaabtanka Horumarinta (A4D) waxay shaqaalayneysaa jagooyinka hoos ku taxan. Barnaamijkan ay maalgeliso USAID wuxuu hagaajinayaa isdhexgalka ka dhexeeya muwaadiniinta (gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada) iyo dowladda iyadoo la xoojinayo hababka isla xisaabtanka jira.
Kormeeraha Deeqaha / Chargé (e) de Wax ka qabadka et Sous-Subjects: Abidjan, oo qaar kood safar ku maraan gobolka oo dhan
Khabiirka Isgaarsiinta / Specialiste de communication: Abidjan
Kaaliyaha Barnaamijka / Kaaliyaha (e) barnaamijka au: Abidjan
EAI waxay la shaqeysaa la taliyayaal farsamo oo xirfad sare leh si ay u taageeraan baahiyaha barnaamijkeena adduunka oo dhan. Bulshadeenna kartida leh waxay siisaa EAI soosaarista khubarada farsamada ee laxiriirta himiladeena ah wadida isbadalka bulshada iyada oo loo marayo a adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin cilmi baaris la dabaqay, tababar kooxeed, talo bixin hal-qof ah, caawimaad farsamo, iyo hirgelin toos ah. Shabakadani waxay naga caawineysaa inaan ka soo qeyb galno la taliyayaal si aan u siino adeegyo la talin muddo gaaban iyo mid dheerba dalka Mareykanka. iyo duurka si loo taageero howlaheena adduunka.
Fursadaha Wadatashiga Cusub:
Raadinta la-taliye xagga turjumidda iyo qorista warbixinta (Faransiis illaa Ingiriis) oo loogu talagalay mashruuca EAI ee adkeysiga nabadda ee EAI Xilliga kama dambaysta ah ee la soo gudbin karo: 27 July 2021. Waxbadan ka baro halkan: Turjumaanka R4P / La-Taliyaha Qoraaga
Raadinta la-taliye khibrad u leh Kormeerka, Qiimeynta, Warbixinta, iyo Barashada (MERL) si loo sameeyo qiimeyntii ugu dambeysay ee mashruuca EAI ee Codadka Nabadda ee EAI. Waxbadan ka baro halkan: La Taliyaha Qiimeynta Ugu Dambeysa ee V4P
Raadinta la taliye si ay u siiso taageero goboleed mashruuca EAI ee Codadka Nabadda ee EAI inta lagu jiro xiritaanka. Waxbadan ka baro halkan: Xidhitaanka Taageerada Gobolka V4P
Raadinta la-taliye khibrad u leh Korjoogteynta, Qiimeynta, Warbixinta, iyo Barashada (MERL) si loo sameeyo qiimeyn ku saabsan mashruuca EAI ee Codadka Nabadda ee EAI iyo tababaridda shaqaalaha iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka goosashada natiijada. Faransiis iyo Ingiriis ayaa loo baahan yahay. Shaqaalaha fadhigoodu yahay Galbeedka Afrika, lataliyaha ayaa noqon kara meel fog. Waxbadan ka baro halkan: La Taliyaha V4P MERL & Goynta Natiijada
Raadinta la-taliye caalami ah si loo siiyo taageero hawlgallada loogu talagalay xidhitaanka mashruuca EAI ee Codadka Nabadda ee EAI. Qiyaastii 90 maalmood, kordhin ayaa suurtagal ah. Abidjan, Côte d'Ivoire. Waxbadan ka baro halkan: Xidhitaanka Taageerada Hawlgallada La-Taliyaha V4P
Raadinta Khabiir Maaliyadeed iyo Hawlgallo si ay u bixiso gargaar farsamo oo muddo-gaaban ah oo loogu talagalay mashaariicda iyo shaqaalaha Niamey, Niger. Faransiis ayaa loo baahan yahay, Ingiriisiga looma baahna laakiin waa la door bidaa. Waxbadan ka baro halkan: Khabiirka Dhaqaalaha iyo Hawlgallada - La-Taliyaha
Raadinta Qandaraasyo, Deeqo, iyo La-taliye Soo-iibsi si ay u bixiyaan adeegyo la-talin ah oo ku saabsan tababarka u hoggaansanaanta USG, soo iibsiga, subaarista horudhaca abaalmarinta iyo maaraynta iyo daba-galka abaalmarinta ka dib, iyo u hoggaansanaanta abaalmarinta iyo tarjumaadda xeerarka iyo xeerarka deeq-bixiyeyaasha. Waxbadan ka baro halkan: Deeqaha, Qandaraasyada, iyo La Taliyaha Soo iibsiga
Raadinta Xafiiska Shisheeyaha & Horumarinta Xafiiska (FCDO) Qiimaha, Qiimeynta, iyo La Taliyaha U-hoggaansanaanta si loo taageero horumarinta istiraatiijiyadda kala-duwanaanta maalgelinta EAI Waxbadan ka baro halkan: Qiimaha FCDO, Qiimeeynta, iyo La Taliyaha La Taliyaha
Raadinta soo jeedinta qorayaasha muddo gaaban si ay u taageeraan fursadaha ganacsi ee cusub iyagoo ka jawaabaya soo jeedimo dhowr ah oo ku saabsan Aasiya iyo Galbeedka Afrika. Waxbadan ka baro halkan: La-taliyayaasha Qoraalka Soo Jeedinta
EAI waxay leedahay wicitaan furan oo lataliyayaasha waxayna u isticmaasha barkaddan inay raadiso khabiiro farsamo sidii loogu baahdo. La-talinta muddada-gaaban ah ayaa sida caadiga ah si toos ah looga buuxiyaa macluumaadkeenna. Fadlan u soo dir CV-gaaga talinancies@equalaccess.org in lagu daro kaydkeena xog uruurinta iyo in laga hawl galo la tashiga meelaha:
Ka Qaybqaadashada Madaniga ah
Sinnaanta Jinsiga iyo Awooda Haweenka
Korjoogteynta iyo Qiimeynta
Dhisidda Nabadda iyo Bedelidda Xagjirnimada
Mashruuca Maaliyadda, Hawlgallada, iyo Maareynta